Khangela iziqulatho ze-Intoxication
Umqu. I-16 No. 4 Ukuxiliswa
Umqu. I-16 No. 5 Ukunxila kwengqondo
Umqu. I-16 No. 6 Ukunxila kwengqondo
Umqu. I-17 No. 1 Uxinzelelo lwengqondo nangokomoya
Vol. 16 JANUWARI, 1913. 4
IGAMA elithi isiselo esinxilisayo likwi- "standard Dictionary" lithetha ukuthi, "Isenzo sokunxila, okanye imeko yokunxila; ukunxila. Imeko yolonwabo olukhulu lwengqondo; Ukudakumba, ukunyuka ukuya etywaleni. ”Ukudinwa, kuchazwa njenge-" Phantsi kwempembelelo yotywala obunxilisayo kangangokuba kude kuphulukane nolawulo oluqhelekileyo lomzimba kunye nengqondo, ... ukubonakalisa ubundlobongela, ukuxabana kunye nokulala nezilwanyana. "
I-Intoxication ligama elenzelwe isifundo okanye umzimba, ubuthi, ukusuka kwisiLatin, ityhefu, okanye umGrike, I-toxikon, intsingiselo ityhefu; isimaphambili in intsingiselo thatha ngaphakathi okanye ukuvelisa; kunye, nesimamva Indawo isenzo esibonisa, ilizwe, okanye iarhente. Ukunxila kuthiwa "kukubangela ityhefu okanye imeko yetyhefu." Isimaphambili in kuthetha ukungena okanye ukuvelisa “imeko yokuba yityhefu.”
Ityhefu kuthiwa "yiyo nayiphi na into ethe yangeniswa kwinkqubo yasebenza ngendlela engeyiyo ngokwenyani ngendlela engeyiyo eyomatshini, ebangela ukubulala okanye ukonakalisa impilo." Ke ngoko ukunxila kukuthatha ityhefu, okanye ukuvelisa imeko yokuba yityhefu; "Okunokubangela ukufa okanye ukonakalisa impilo." Ixesha elimiselweyo loku, kuxhomekeke kwinani kunye nomgangatho wesiyobisi othatyathwe okanye ovelisiweyo kunye nokukwazi okanye ukungabinakho komgaqo-siseko ukuwuthwala okanye ukuwuxhathisa.
Igama elithi isiselo esinxilisayo alusetyenziswa zi-lexicons zanamhlanje ngokwengqondo yokuthatha kuphela utywala okanye iziyobisi, kodwa ngendlela ebanzi, njengoko isetyenziswa kwingqondo nasekuziphatheni. Uluvo lwegama liyinyani ekusebenzeni kwalo kwingqondo nakwindlela yokuziphatha njengoko linjalo xa lisetyenziswa kwimeko enotywala. Apha, igama elithi ukunxila liza kusetyenziswa ngendlela emine.
Zintlanu iintlobo zokunxila umntu azithobela, ngokwezimo zakhe ezine: Ukunxila ngokwemvelo yakhe, ubuntu bakhe bobuchwephesha, uhlobo lwengqondo yakhe, kunye nemeko yakhe yokomoya. Ukunxila kobunye besimo sakhe kunokusebenza ngaphezulu kwesinye okanye kwesinye kwesinye. Iindlela zokunxila eziphathisiweyo kuya kuba kukunxila ngokwasemzimbeni, ukunxila ngokwasemphefumlweni, ukunxila engqondweni, kunye nokunxila ngokomoya.
Isetyenziswe ngokubhekisele kwezi zinxila zinxibelelene nentsingiselo yegama ukunxila yile: Imeko yetyhefu ebangelwa kukuvuselela ngokungafanelekanga okanye ukuthintela ukusetyenziswa komgaqo okwazi ukusebenza kwemizimba, amandla ayo, amandla ayo engqondo okanye amandla ayo.
Kwindlela nganye kwezi zinxila ezine zibangelwa, ziziselo ezinxilisayo, iindlela zophuhliso, izizathu zokuthatha okunxilisayo, iimpembelelo zokunxila, ixesha lazo kunye nokupheliswa kwazo, kunye nonyango lwazo.
Utywala kunye nee-narcotic zizinto ezinxila. Iziselo ezinje ngeebhiya, iileyile, iigin, iigin, iigranti, i-whiskeys, ii-liqueurs, ziziselo apho umoya wotywala ungummiselo otywala. Indlela yokuxakwa kukusela ezi okanye ezinye izinto ezinotywala, okanye uzithathe njengezithako zokutya. Kukho izizathu ezinikiweyo zokuthatha isiselo esinxilisayo, njengendlela yokuzibandakanya, ukuvelisa ubudlelwane obuhle, ukugxeka okuhle, ukubangela ukuzonwabisa, ukuba kukudla, ukuvuseleleka, ukuthintela ukubhubhiswa, uqhuba ukhathalelo olubuthuntu, ukhulula usizi, ubangela ukulibala kweentsizi, kwaye woyise ukuphelelwa lithemba, ukuba ivuka inkalipho, ukuba ivuselela ukucinga. Abanye kwakhona, bayithathe ngenxa yothando lweemvakalelo ezivelisayo, kunye nabanye ngeenjongo zonyango ezimiselwe ngugqirha.
Iziphumo zokunxila ziboniswa ngezenzo zomzimba, imeko yomzimba, iimvakalelo, isimilo kunye nengqondo yomntu lowo; ezimiselweyo ngohlobo kunye nobungakanani botywala obuthathiweyo, imeko yomzimba oyisebenzisayo, kunye nokukwazi kwengqondo ukujongana nezinto ezinxilisayo kunye nomzimba. Ngokobume bendawo kunye namanqanaba ahlukeneyo okunxila, kuboniswa ubushushu, ubukrelekrele, ukhuthazo lwendlela ehamba kunye nokuzibamba, ukuxabana, ukudibana, ukuphambana, ukuxabana kwentetho; kwaye oku kulandelwa ngoxinzelelo, ukuphumla, ukudinwa, ukungakhathali kwe-gait, ukuqina kunye nokungaqiniseki ngentetho, ukothuka, ukubetheka, ukungathobeki. Iimvakalelo zahluka ukusuka kubumnandi obuthambileyo ukuya kumothuko wobundlongondlongo, ukusuka ekuvuseleleni kakhulu ekubandezelekeni nasekufeni.
Utywala kuzo zonke iziyobisi ezinxilisayo buqala ukuvelisa iziphumo zayo kumgaqo-siseko wonke womzimba nje ukuba bususwe esiswini. Nokuba ubungakanani bayo buza kuveliswa kwangoko okanye buthothwe ixesha elide kuya kuxhomekeka ekuhlanganiseni kwesiselo kunye nomda kunye namandla omoya wotywala kwindawo. Kuxhomekeka kumxube, utywala kuqala buchaphazela umzimba okanye ingqondo. Kuzo zonke iimeko, nangona kunjalo, isebenza ngokuthe ngqo kwiinkqubo zemithambo-luvo, emva koko kulwelo lomzimba, izihlunu, kwaye alushiyi nalinye ilungu lomzimba lingakhuselekanga. Xa uthathwa ngamanani amancinci ngabantu abanomzimba owomeleleyo, onempilo kunye nokugaya ulungile, iziphumo zinokubakho ngokuqinisekileyo; ubuncinci, akukho kuphazamiseka kubandezeleka. Ngokusebenzisa ixesha elide kunye nokuziqhelanisa, nokuba zincinci, kwaye ngakumbi ezo zinengqondo zibuthathaka, isimilo esibuthathaka kunye nemizimba engalunganga, iziphumo ziyingozi. Xa kuqala ukuthathwa, utywala busebenza njengento ekhuthaza idosi elincinci. Kwiidosi ezinkulu zivelisa ukunxila; Oko kukuthi, eyona nto iphambili kwaye enovelwano yenziwa ngayo, ii-lobes zekritshi zibaliwe. Ezi zijongayo kwaye iseyinkqubo ye-cerebro-spinal, uvavanyo lwe-system ye-nervous system, izihlunu ngokuzithandela zenziwa zingasebenzi, isisu sihlupheka kwaye imisebenzi yayo ithintelwe. Ekuphela kwendawo yomzimba engabanjwanga sisifo sokukhubazeka kunye namalungu omzimba ngamaziko azenzekelayo kwi-medulla oblongata, eqhuba kwaye ilawula ukujikeleza kunye nokuphefumla. Ukuba isiselo esininzi asithatyathwanga, ixesha lokunxila liphela, umzimba uphinda usebenze, amalungelo ngokwawo kunye nemiphumo yotywala inokupheliswa. Ngamaxesha okuphindaphindiweyo kotywala, okanye ngokusetyenziswa kotywala ngesiqhelo nangayiphi na indlela, inkqubo yemithambo-luvo ihlala icekeceke, amalungu angasebenzi okanye agule kwaye angakwazi ukwenza imisebenzi yawo yesiqhelo. Utywala bubangela ukuthoba kwamadlala asesiswini kwaye kuhlolwe imisebenzi yawo kunye nokungonakalisi ukugaya. Iyenza nzima isibindi, yenze buthathaka intliziyo nezintso, zibangele ukuwohloka kwengqondo. Ngamafutshane, ethoba umgaqo-siseko ngokubangela ukubamba ngaphezulu kwezicubu ezihambelana nawo onke amalungu kunye nezicubu zomzimba. Emva kokufa ubukho botywala bunokufumaneka kuwo onke amanzi emzimbeni. Ifumaneka ngokulula kulwelo lweCypbro-spinal fluid xa yonke imozulu yayo inyamalale kwenye indawo emzimbeni; lonto ibonisa ubunye bayo kwinkqubo yovalo.
Ngokungalindeleki emva kweziphumo ebezilandela, kwaye ngokuzithemba kokulunga kwangoko kunokwenza izigulana zabo, amagqirha ayingunobangela wokuphazamiseka okuninzi kotywala. Oogqirha abaninzi bachaza ubutywala kulo naluphi na uhlobo lwayo njengento ekhuthazayo okanye yethoni, kwaye ngamanye amaxesha kuthiwa kuyenza kwezinye iindlela ukwenza igazi, ukunika amandla, ukwakha umzimba. Nokuba oku kungenjalo okanye akunjalo, kuyacaca ukuba isiselo esinxilisayo senziwe njengezonyango senza isidlo somnqweno kunye nokunqwenela iziyobisi ezinxilisayo emzimbeni, kwaye isiguli sihlala sikhula sisiba linxila.
Enye indlela yokuphuhlisa ukunxila kukwenza into enkulu kunye nokuthengisa iziselo ezinxilisayo phantsi kwemask yento ebizwa ngokuba “ngamayeza awodwa awodwa abenzi bamachiza. Abo bathenga iyeza lokunyanga ngokuqinisekileyo le patent bayayikholelwa ukuba baxhamle ziziphumo ezivelisayo, kwaye bathenga ngaphezulu. Ezinye izithako zonyango-zonke zihlala zingenabungozi. Kodwa isiselo esinxilisayo kumayeza awodwa awenzi wechiza ahlala evelisa isiphumo kwabo basisebenzisayo, abo ke abo basenziyayo banqwenela ukuba kube njalo. Oko kukuthi, kudala inkanuko kunye neminqweno yotywala ngaloo ndlela.
Iziphumo zokunxila butywala kwizithambisi ziyahlukahluka kwiimvakalelo zobulolo ukuya kubungqingqwa kunye nobunzulu obukhulu, emva koko kuncitshiswe ukugqiba ukungathobeki. Olu tshintsho lunokulandela ngokuthe ngcembe okanye ngokukhawuleza. Kukho ukuvutha kombulelo okuhamba emzimbeni kwaye kuvelise imvakalelo evakalayo. Iliso kunye neendlebe ziye ziqaphele ngakumbi. Umnqweno uyinto enomtsalane. Kukho imvakalelo yokukholelwa kunye nokusebenza ngokungakhathali okushukumisela ukuba ufuna ukunxulumana nabanye, okanye enye imo yengqondo, isimilo, ukuthanda izinto kunye nokuzimisela ngomnqweno wokushiya abanye babe bodwa, okanye banotyekelo lokuchasana nemeko yokugula. Kukho imvakalelo yokufudumeza, ukulungela ukuthatha indawo, ukuxabana okanye ukulwa ngento eyenziweyo okanye ethethiweyo. Imvakalelo yokugula okanye yokuba nesithukuthezi iyaziva. Izinto ezijikelezayo zibonakala ngathi ziyahamba kwaye zidibene. Umhlaba unyikima ngamaza athambileyo, okanye njengolwandle oluxineneyo. Akukho siqinisekiso somgama. Iinyawo kunye nemilenze yaba sisisindo esikhulu. Amehlo aya esiba nzima kwaye aqubude, iindlebe ziyeva. Ulwimi lunzima kakhulu, kwaye liyala ukucacisa. Imilebe iyalahleka; zizinto ezenziwe ngomthi kwaye aziyi kunceda ekwenzeni isandi sibe ngamagama. Ukozela kuza. Umzimba uziva ngathi ukhokelela. Umgaqo-siseko uyazi ukuba unqamkile kwiziko labo lobuchopho kwingqondo, kwaye kukho ukuwohloka kokungazixhasi kunye nokufa. Iziphumo emva kokunxila sisifo sokuqaqanjelwa sisisu, intloko, unxano, ukutshisa, ukungcangcazela, isisithukuthezi sokucinga isiselo esinxilisayo, umnqweno ogwenxa okanye ukulamba okungafunekiyo ukusela isiselo esinxilisayo ebizwa ngokuba yi-Delirium tremens, apho imigaqo-nkqubo yokwazi inyanzeliswa ngezantsi kwendawo ebonakalayo, apho ibona izidalwa ezingenabungozi okanye ezifihlakeleyo, iimpukane, izinambuzane, amalulwane, iinyoka, izilwanyana ezilahlekileyo, ezizama ukugxotha okanye ukuzama ukubaleka kancinci okanye ukungakhathaleli imeko yomzimba okanye kwabo bamngqongileyo. Kule meko umntu obandezelekileyo unokuhambahamba kwaye athabathe iimpukane eludongeni, okanye asukele izinto emoyeni kodwa akukho mntu ngaphandle kokuzibona, ngamehlo agcwele lunkwantyo, egcobile ngovuyo, okanye anokuthi, abande kwaye abe mhlophe luloyiko. , zama ukufihla izinto ezimsukela, okanye ukubaleka kule nto ayibonayo, de abe uyekhutyekiswa, okanye aphelelwe ngamandla.
Iziphumo zotywala kwingcinga, umlingiswa, ingqondo yomntu, ziya kuxhomekeka ikakhulu kubume bengqondo yokulawula ukusetyenziswa kwayo; kodwa, nangona yomelele ingqondo, ukuqhubekeka kokusela iziselo ezinxilisayo ngesixa esikhulu kuya kuvelisa iziphumo ezifanayo zomzimba. Kufuneka ichaphazele ingcinga kunye nomlinganiswa; kwaye, ngaphandle kokuba woyisiwe, uya kuyaphula kwaye ayenze ikhoboka lengqondo.
Phantsi kwempembelelo yotywala iinguqu ezingaqhelekanga zibonakala zenziwa kumlinganiswa. Umntu othuleyo nonobuntu obuhle uya kuguqulwa abe lu-rowdy okanye iidemon, kwaye umntu oqhele ukunikwa intetho eninzi kunye nobukrwada unokuba nobungcathu kwaye abe ngogqibeleleyo. Phantsi kwempembelelo yotywala abanye banokuhamba njengabantwana okanye babble njengeembekita. Abanye baya kunyanzelisa ukubalisa ibali lobomi babo. Amadoda athengiswayo anokufumana iimvakalelo kunye neveki malunga nomcimbi othile ocaphukisayo. Abo bagculela inkolo kunye neendlela zayo, banokucaphula indinyana ende kwizibhalo, banike ingxelo ngemicimbi yenkolo, baphakamise uhlobo oluthile lwenkolo okanye imisitho yenkolo baphikise unobangela kunye nokulangazelela ukunxila, mhlawumbi nobubi botywala. Ngaphantsi kwempembelelo yotywala amanye amadoda azalisa izikhundla zokuthemba nembeko atshintshwa aba zizilo ezinika inkululeko yokuzilawula kunye nokuzonwabisa, iinkanuko zakwantu ezixhaphakileyo, ukucinga okuya kothusa amaqabane abo njengoko kunokuba njalo ngokwabo ebomini . Phantsi kwempembelelo yokubulala ngotywala kunye nolunye ulwaphulo-mthetho olwenziwe amadoda angenakwenziwa ngenye indlela, kwaye oluzisa usizi kunye nomonakalo kubo nakwabanye.
Utywala buyayithintela ingcinga yabanye kwaye ivuselela ingcinga kwabanye. Abanye ababhali kunye nabaculi bathi benza umsebenzi wabo oncomekayo xa bekwenza oko; kodwa ezi kuphela ziziphumo zexeshana, phantsi kovuselelo lotywala. Ukusela ngokuziphatha kuthoba isidima, imibala kumbala, kuze konakalise ingqondo. Ezinye iintlobo zokunxila emzimbeni zinokubangela ukungasebenzi, kuvelise iingxaki zosapho, zonakalise impilo kwaye zibangele ukufa; kodwa kukunxila kuphela okunokusonakalisa ngokupheleleyo ingqibelelo kunye nokuzinika isidima, ukuyisusa yonke imbeko yokuhlonipha nokuzihlonipha, ukuguqula amadoda athembekileyo nobubele abe zizityholo ezingenantliziyo namasela nezixhobo zokuphambanisa, ukungabinakho ukwenzakala kwabanye, kwaye kuvelise ukungabi nazintloni nokuzinyelisa. Utywala kuphela obukwazile ukwenza amadoda anobutyebi nenkcubeko ngenene bakhasa esiswini, kwaye ukusuka apho, banciphise, baphakamise amehlo abo egazi kwaye befikelela kwizandla zabo ezingazinzanga ukucela umntu odlulayo ukuba anele ukuba athenge isiselo.
Unobangela wokunxila ngokomzimba yi-narcotic kukusela kwe-opium, ganjah (ukusuka cannabis indica), bhang (i-cannabis sativa), okwahluka kwezi ngxube zabo ezahlukeneyo kunye nezinye izinto.
Izizathu ezinikiweyo zokuthatha ithoni yesifo esine-narcotic zezi, ukuba bazolisa izinzwa, banciphise kwintlungu, bavelise ubuthongo, kwaye benze ukuba abathengi basuke engxakini, babone imibono kwaye beve izandi ezingaqhelekanga, kwaye kufuneka zithatyathwe kuba— ayinakuncedakala. Iindlela ezinokuthi zithathwe i-narcotic zisetyenziswa ngendlela yepilisi, uyilo, ngenaliti, ngokutshaya okanye ngokuyitya. Oogqirha rhoqo baba ngabo ukwazisa ii-narcotic kulabo abathi kamva babe ngamaxhoba e-narcotic toxication. Ukwazi umnqweno wesigulana ukufumana iziphumo ezikhawulezayo kunye nokufumana ukukhululeka kwintlungu, okanye ukwanelisa ulangazelelo lwabo ngechiza, ugqirha uyalela okanye anike narcotic ngaphandle kokuthatha ingqalelo efanelekileyo kwiziphumo ezinokuthi zilandele. Ngokusetyenziswa kweenaliti zabo, iipellets zabo kunye neetomato zabo, abanye ogqirha batyhutyha kwizigulana zabo i-morphine fiends minyaka le. Ukuva iimpembelelo ezintle eziveliswa kukutshaya i-opium, ukuba "nomhlobo," umlutha kumkhuba ocebisa ukuba uzame, ukuya phantsi, ukubona abantu abatshayayo bephethe iipayipi, ngenxa yokufuna ukwazi, okanye umnqweno ongathandekiyo, umntu uzama umbhobho, "omnye." Oko akuhlali kulanele. Enye into efunekayo "ukuvelisa isiphumo." Iziphumo azidli ngokuhlala zilindele. Kuya kufuneka afumane isiphumo esilindelweyo. Uyayenza kwakhona. Ke uba "liyeza fiend." Ngendlela efanayo umntu unokungena kumkhwa we-ganjah, oqhele ukutshaya. I-Bhang inxila, okanye ityiwa njenge-confection, okanye ithathwe njengesiselo ngesimo sayo esibuthakathaka, esibizwa ngokuba yi-siddhi. I-Bhang ayi-hashish okanye i-indian hemp. Iziphumo zayo zahlukile. IHashishe ngamagqabi ethenda avela I-cannabis sativa, ngaphambi kokuba amagqabi awo avulwe, kwaye amagqabi omile kwaye abhema. I-Bhang ngamagqabi athatyathwe emva kweentyatyambo, ehlanjwe, emile kwaye enxile. I-Bhang ayaziwa ngokubanzi eNtshona, kodwa kuthiwa iyasetyenziswa eIndiya. Apho kuthiwa uthathwe ngumntu yedwa, okanye kwiindibano ezikhethiweyo, okanye kumnyhadala omkhulu wonyaka-uDurja Pujah.
Iziphumo ze-narcotic emzimbeni kukuba, ziphazamise ukugaya, zonyuse okanye zinciphise ukuphefumla kunye nokujikeleza kwaye zibulale iingcongconi okanye zibenze bangxamile. I-Opium yenza umzimba ungasebenzi. UGanja unokusebenza njengomchulumanco. UBhang uvelisa ukuzola. Iziphumo zokunxila kwi-narcotic kwiimvakalelo zezi, ukuqina komzimba kunye nokuvulwa kwezinye iimvakalelo zezinto ezingezizo ezomzimba, ezingaqhelekanga. Kukho imvakalelo edakumbisayo, ephuphayo, njengokudlula kwindawo yokulala. Indawo engokwasemzimbeni inokwandiswa, idityaniswe okanye iwele kude kwizinto ezintsha ezibonakala. Abafazi bobuhle, amadoda ahle, enza okanye athetha ngembeko. Kwigadi ezinqwenelekayo ezivuyisa iliso, umculo wokwenza uqhoqhoqho uvakele kwaye iziqholo ezithandekayo zongeza kumtsalane. Eyona nto ibangela umdla engqondweni yakhe, inika ingqwalaselo isihloko. Ukuphumla, i-languor kunye nokulula kuyabhengezwa ngakumbi kwiziphumo ze-opium kunokwenziwa kwi-ganjah. I-Ganjah ihlala ibangela ukuba imvakalelo yesifiso sokusebenza ukuba isebenze ngakumbi kunokuba ivela kwi-opium. Iimvakalelo ezibangelwa yiBhang zilawulwa zezi zinto zikho ngexesha lokuthathwa kwazo, ngelixa ezo zisuka e-opium nase ganjah zihlala zahluke ngokupheleleyo. Kwi-ganjah kunye ne-opium iimvakalelo ziyanda. Kwi-opium i-languor iyanda de isihloko sibe singazi nto. Ukusuka kwimeko yokungazi nto ivela kancinci okanye ngokothuka. Umtsalane, ukuhluthwa, uyolo luhlala luhlengahlengiswa. Endaweni yezidalwa ezithandekayo ezithandileyo okanye ezimcaphukisayo, ubanjiswa yinyama, izilwanyana ezirhubuluzayo, amabala, kunye nezinye izinto ezothusayo nezoyikisayo, ukusuka apho anokuthi abaleke kuphela ngokuthatha kwakhona ubuhlobo obutsha. Mhlawumbi ubanjwe kuphela ngomeva etshayo okanye ahlukanise iintloko kunye nezinye izinto ezimbi emzimbeni anokuthi aziphilise ngokuthatha enye idosi. Iziphumo emva kwe-bhang azichazwanga kangako, nangona zinokuthi zisuse inkanuko; inene, iya kuthintela indlala; kwaye nayo, inako ukuvelisa imvakalelo yokuziva ulilize, ukungabi nto yanto nokungasebenzi. Ukuba kuthathwe umthamo omkhulu kakhulu, umthengi akavuki.
Ukunxila nge-narcotic kunefuthe elibonakalisiweyo kwingcamango nakwimpawu zomntu ophantsi kwakhe. Ufumana inkululeko ethile kunye nokukhuthaza kwengcinga kunye nokudlala ngefashoni, ekungekho mntu uqhelekileyo unokuba nayo kwimeko yakhe eqhelekileyo. Le ngcinga ithatha iphiko kwaye ihambe kwiindawo ezibonakala zingenamda, kuyo nayiphi na indawo kwaye ngokomnqweno wengcinga, yakha izakhiwo, ixhobise imikhosi, imisela oobukumkani. Udala umhlaba kunye nabantu; kuyo yonke le nto usebenzisa amandla omlingo ukuba ayenze kwaye ayonwabele. Phantsi koxinzelelo lwe-narcotic umabhalana othobekileyo unokuba yinkosi yezemali, kwaye alawule iintengiso zehlabathi; intombazana yivenkile iyakuba yikumkanikazi, ithethwe ngabahambisi benomkhwa, yathandwa okanye yamonelwa ngamanenekazi; Umntu ohamba ekhayeni angabi yinkosi yezinto ezininzi. Nantoni na into enokuthi yenziwe ingcinga kunye nengcinga ibonakale iyinto yokwenene kukunxila ku-narcotic.
Le ntshukumo yeengcinga ivelisa impendulo kumlinganiswa ongayifaneleyo uxanduva noxanduva lwehlabathi. Kukho ukungalingani kwexabiso lezinto. Ingqwalaselo yahlulahlulwe phakathi kwamaxesha okunxila kunye neembophelelo zehlabathi. Ithoni yokuziphatha iphantsi, okanye isimilo singaphoswa kwimimoya. Nangona kunjalo omnye umntu olikhoboka lotywala i-narcotic inokuba uzama ukufihla umkhwa wakhe, uya kwaziwa kwabo bayiqondayo indalo yakhe. Kukho ukungakhathali okuthile, ukungabinakho ukuthobeka, ukungabinabuntu, malunga nomntu, ngokungathi iimvakalelo zakhe zisebenza kwenye indawo. Uphawuleka ngokungabikho kovuko oluthile, kwaye ujikelezwe ngumboniso oqhelekileyo okanye ivumba elithabath 'unyawo lomlinganiswa wentlambululo athe waba likhoboka lakhe, nekubonakala ngathi uyakhupha.
Iziphumo ze-bhang ziyahluka kwezo ze-opium kunye ne-hashish kuba umsebenzisi we-bhang unokumisela umxholo wengcinga yakhe ngaphambi kokungena phantsi kwempembelelo yayo. Phantsi kwempembelelo ye-bhang, umntu unokuqhubeka nencoko okanye aqhube isifundo sokuqiqa. Kodwa yonke into ayicingelayo okanye ayenzayo iya kukhutshwa ngakumbi, yandiswe okanye yandiselwe kwinqanaba elimangalisayo. Nawuphi na umbandela wokucinga unokuvavanywa ngokwengqondo njengesiqwenga somzimba phantsi kwesibonakhulu esikhulu. Izinto ezijikelezayo okanye imifanekiso yamagama ziya kwandiswa kwaye zinombala ngokuhambelana nomoya oqhubekayo. Yonke intshukumo ibonakala ibaluleke kakhulu. Ukunyakaza kwesandla kugubungela ixesha elide. Inyathelo lifana neewadi ezilikhulu; umzuzu onjengenyanga, iyure yobudala; kwaye konke oku kunokuba nakho ngaphandle kokunqunyulwa emzimbeni.
Iziphumo ezinokubakho kwi-narcotic toxication yile, ukuba ingqondo ilahlekelwe yinto yokuxabiseka kunye nombono wokulingana; Iyatyeshelwa, kwaye ingabaluleki, ingakwazi ukujongana neengxaki zobomi, zokuqhubeka nokukhula, zokufezekisa uxanduva lwayo okanye ukwenza isabelo sayo emsebenzini wehlabathi.
Ixesha lotywala okanye i-narcotic toxication inokuhlala okanye okwethutyana. Kukho abathile abathi, emva kokuba bebandezelwe yimpembelelo yexeshana, abavumanga ukuzivuselela. Kodwa ngesiqhelo xa umntu eba likhoboka layo nayiphi na imikhwa, uhlala eli likhoboka layo ebomini.
Kukho ezinye iindlela zokunyanga isiselo esinxilisayo, phantsi kwamagama abo baqalayo, okuya kuwunqanda umnqweno waso nasiphi na isiselo esinxilisayo. Unyango kunyango lwe-narcotic toxication alusoloko luphumelela. Ukuba lowo uphilisiweyo akaphindi asele, uya kuphila. Kodwa ukuba akaphiliswa okokuqala kwingcamango yakhe kwaye ukuba uvumela umbono wakhe ukuba acinge ngombandela wokusela kwakhe kwaye acinge ngesenzo sokusela kwakhe, ingcinga yokusela iya kuzisa imeko enobuzaza, apho abongozwa khona omnye okanye ngengcinga yakhe, “ukuthatha nje enye ngaphezulu.” Ke indlala endala iyavuswa, aze ke abuyele apho wayekhona ngaphambili.
Unyango lwe-alcoholx okanye i-narcotic toxication lunokunika isiqabu kwaye luncede ekunyangeni, kodwa olona nyango kukunxila emzimbeni kufuneka luqale kwaye lwenziwe ngengcinga. Apho umzabalazo wokulwa nokugomela kufuneka ulwe ugqitywe kwaye uphumelele, ngaphambi kokuba kubekho naluphi na unyango olusisigxina enyanisweni.
Umoya osebenza nge-narcotic uhlala embundwini weziva. Ayizukuvumela umgaqo-siseko wokwazi emntwini ukuba udlule ngaphaya kobukhosi bawo, okanye wazi iimfihlakalo kunye nemfihlakalo yakhe, ade abe uzibonakalise ekhuselekile kuthambiso lweemvakalelo kwaye efunde ukuzilawula.
Umoya wotywala ligosa eliphezulu lomthetho. Ime kwimigca yehlabathi yehlabathi. Sisicaka sabo bathobela kwaye singabaphathi bomthetho, kwaye siyakubavumela ukuba badlule kwaye sibathwale xa besazi kwaye bekwazi ukulawula. Kodwa butyhafile, buburhalarhume, kwaye yinkohlakalo, kwabo bayixhaphaza kwaye bengawuthobeli umthetho ekufuneka bawusebenzisile.
Kwinombolo kaFebruwari iya kuphathwa ezinye iintlobo zee-Intoxicants.